Guddiga Doorashada oo codsi u diray Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha | Allbanaadir.com
Home NEWS Guddiga Doorashada oo codsi u diray Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha
Guddiga Doorashada oo codsi u diray Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha
Guddiga isku dhafka ah ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal ay goordhaw soo saareen waxa ay uga codsadeen musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha in ay soo gudbiyaan xubnaha codadka u tirinaya.
Qoraalka kasoo baxay guddiga doorashada ayaa lagu sheegay in musharaxiinta laga doonayo in ugu dambeyn 12:30am (duhurnimo) ee maanta soo gudbiyaan xubnaha codadka u tirinaya musharaxiinta.
”Dhammaan Musharraxiinta Madaxwaynaha JFS waxaa laga codsanayaa in ay ka soo jawaabaan codsiga Guddiga Doorashada Madaxwaynaha oo ah in Musharrax kasta Guddiga u soo gudbiyo xubinta u tirinaysa codadka, musharraxii ku soo gudbin waaya waqtiga loo qabtay uma suurta gali doonto in uu hoolka doorashada soo galo qofka la socda” ayaa lagu yiri qoraalka guddiga.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in beri oo axad ah ka dhacdo teendhada Afisiyooni, waxaana doorashada isku diiwaangeliyay oo ku loolamaya ilaa 39-musharax ay ku jiraan kuwa aad u saameyn badan.
Previous articleBandow lagu soo rogay magaalada Muqdisho iyo Shacabka oo farriin loo diray
Next articleShir Xasaasi ah oo looga hadlayay Amniga doorashaada oo goordhaw ka dhacay Muqdisho (Sawirro)